Ozi - Otu esi azuta akwa mmiri ozuzo
E nwere ụdị 4 nke akwa mmiri ozuzo, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, nke a ga-azụta dịka ọnọdụ si dị. Lezienụ anya ịmata ọdịiche dị na akwa mmiri ozuzo bụ ihe eji emegharị emegharị. Ihe eji emegharia ihe nwere isi puru iche, mama na akwa ahu enweghi ike obula, ihe ndi ozo di ocha, o gha achopu ya ma wepu ya n'oge eji ya.
Ọrụ nke akwa mmiri ozuzo dịkwa oke mkpa. Ọ bụrụ na ogologo mmiri nke akwa mmiri ozuzo buru oke ibu, ogologo stitch enweghị nkwekọ, akara ahụ erughị ogo, na usoro mgbochi mgbochi anaghị anabata ya, ọ dị mfe ịbanye na mmiri ozuzo.
Stylesdị mmiri ozuzo na-apụtakarị ogologo mmiri ozuzo na-acha ogologo oge, akwa mmiri na akwa mmiri ozuzo (poncho), otu (ogologo) dị mfe itinye ma gbanyụọ ma enweghị mmiri na-adịghị mma, ụdị nkewa bụ ihe na-adịghị egbochi mmiri, poncho kwesịrị ekwesị maka ịgba ígwè ( igwe eletrik, igwe igwe) Chere).
4. Ikuku ume
Mgbe ịzụrụ akwa mmiri ozuzo, anyị kwesịrị ịtụle nkasi obi na iku ume nke ọma. Ọ bụrụ na akwa mmiri ozuzo bụ naanị maka nchedo mmiri ozuzo, mana ọ naghị eku ume, mgbe ahụ a na-emechi ahụ iji kpuchie ahụ mmadụ, okpomoku dị n'ime ahụ enweghị ike ịgwụ, na mpụga dị jụụ ma n'ime ya dị ọkụ, na-eme nchịkọta mmiri na mgbochi mmiri. ihe mkpuchi nke akwa mmiri ozuzo.
Uwe mmiri ozuzo nwere nha dị iche iche, yabụ na-adụ ndị ahịa ọdụ ka ha lelee tebụl nha mgbe ha na-azụ akwa mmiri. Ọ kasị mma ịnwale ha. Gbalịa ịzụta ndị buru ibu ka ha wee nwee ike iji ya ọbụlagodi na ị ga-eyi uwe oyi.
Kpụrụ nke mmiri na-ekpuchi mmiri ozuzo bụ ákwà + mkpuchi. Typesdị ihe mkpuchi ndị a na-ahụkarị gụnyere PVC (polyvinyl chloride), PU, ​​EVA, wdg. Raincoats dị mfe imetụ anụ ahụ aka. Iji zere mgbakasị ahụ, a na-atụ aro akwa mkpuchi mmiri ozuzo EVA.
N'oge a, e nwere ọtụtụ agba nke akwa mmiri ozuzo, na ụdị dị iche iche na-agbanwe agbanwe, gụnyere ụdị ndị Britain, ụdị ntụpọ agba ochie, agba siri ike, agba, wdg. You nwere ike ịtụle nchịkọta uwe na mmasị onwe gị mgbe ịzụrụ akwa mmiri ozuzo.